China 220kV Double Loop Transmission Tower Manufacture and Factory |XY Tower
Jonga apha, iminyaka eli-10 yokuGqwesa, amava atyebileyo aphesheya kolwandle,Ikhethekileyo kwinqaba yothumelo, inqaba yonxibelelwano kunye nesakhiwo sombane,fumana iinkcukacha zoqhagamshelwano ngoku!
⦁ Inkampani yaseTshayina edityanisiweyo yamandla ombane, ibonelela ikakhulu ngeemveliso ezahlukeneyo zombane kwiinkampani zamandla asekhaya naphesheya kolwandle kunye nabathengi bemizi-mveliso abasebenzisa amandla aphezulu.
⦁ Ubuchule bomvelisi kwinkalo yeinqaba yentambo yothumelo/ipaliukuhanjiswa nokuhanjiswa kombane,inqaba yothungelwano/ipali, isakhiwo sesikhululo esingaphantsi, kwayeipali yokukhanya yesitalatonjl.njn
⦁ UKUSEBENZA ekwenzeni imisebenzi yethu kunye nokubonelela ngeenkonzo kubathengi bangaphakathi nabangaphandle.
⦁ UKUSEBENZA ekuphatheni imisebenzi kunye neenkonzo zethu ukuze sifumane iziphumo eziphezulu ngexeshana elifutshane.
Iinkonzo zethu eziphambili kunye neemveliso ziquka:
inqaba yamandla ombane
ulwakhiwo lwesikhululo sombane
Isakhiwo sokuxhoma i-PV
INqaba yoThutho lwaMandla
Inqaba yokuhambisa okanye inqaba yombane (i-pylon yombane okanye i-pylon yombane e-United Kingdom, eKhanada nakwiindawo zaseYurophu) isakhiwo esiphakamileyo, ngokuqhelekileyo inqaba yensimbi yensimbi, esetyenziselwa ukuxhasa umgca wamandla ongaphezulu.
Zisetyenziswa kwiinkqubo eziphezulu ze-AC kunye ne-DC, kwaye ziza kwiindidi ezahlukeneyo zeemilo kunye nobukhulu.Umphakamo oqhelekileyo usuka kwi-15 ukuya kwi-55 m (49 ukuya kwi-180 ft), nangona obona bade yi-370 m (1,214 ft) iinqaba ze-2,700 m (8,858 ft) ubude beSiqithi saseZhoushan esiPhetheyo saMandla ombane.Ukongeza kwintsimbi, ezinye izinto zingasetyenziswa, kuquka ikhonkrithi kunye neenkuni.
I-angle-steel tower, i-quadrangular truss structure tower yonxibelelwano inqaba, isebenzisa i-Q345B yensimbi ephezulu njengeyona nto ibalulekileyo yomzimba, isakhiwo esiqinileyo, i-deformation encinci;i-angle steel splicing connection, iinxalenye ezinobunzima bokukhanya, inqaba inokuthuthwa ngesandla kwaye ifakwe ngexabiso eliphantsi.Ubuninzi bemigangatho ye-6 yeqonga inokuxhotyiswa, iqonga ngalinye lixhasa i-antenna ezi-6.
Izinto eziphathekayo Ngokwesiqhelo i-Q345B/A572, Ubuncinci boBume beSivuno ≥ 345 N/mm²
Q235B/A36, Ubuncinci boBume beSivuno ≥ 235 N/mm²
Kunye ne-Hot rolled coil esuka kwi-ASTM A572 GR65, GR50, SS400, okanye nawuphi na umgangatho ofunwa ngumxumi.
Umthamo wamandla 200KV
Ukuwelda Ukuwelda kuhambelana nomgangatho we-AWS D1.1.
I-CO2 ye-welding okanye iindlela ezizenzekelayo ze-arc
Akukho kuqhekeka, isiva, ukuhlangana, umaleko okanye ezinye iziphene
I-welding yangaphakathi nangaphandle yenza isibonda sibe sihle ngakumbi kwimilo
Ukuba abathengi bafuna naziphi na ezinye iimfuno zokuwelda, sinako ukwenza uhlengahlengiso njengesicelo sakho
Ukufakwa kweGalavanization I-Hot dip galvanization ngokuhambelana nomgangatho waseTshayina we-GB/T 13912-2002 kunye nomgangatho waseMelika we-ASTM A123;okanye nawuphi na omnye umgangatho womthengi ofunekayo.
Ngokudibeneyo Idityaniswe nemowudi yokufaka, imo yeflange.
Ukupeyinta Ngokwesicelo sabathengi
Umgangatho owenziwe ngegalvanized: ISO: 1461-2002
Ngaphambili: 132kV iSingle Circuit Angle Steel Tower
Okulandelayo: I-330kV yoMbane woThutho loMbane iTower